Slideshare, Facebook နှင့် LinkedIn တို့ဖြင့်သင်၏ဆလိုက်များကိုမျှဝေပါ Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 21, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အထူးပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခု SEO အတွက် blogging အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်မှုနဲ့စမ်းသပ်မှုအတော်အတန်ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ SEO ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေကိုပေးတယ်။ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာတွင်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအကြံပြုရန်အကြံပေးသူတစ် ဦး နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးသည်။
အံ့သြစရာမှာဖေ့စ်ဘွတ်သည်စကားပြောဆိုမှုတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ Facebook မှာစာမျက်နှာများရှိတယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန် အသင်း ၀ င်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုထဲသို့ကုမ္ပဏီနာမည်မထည့်ဘဲ။ အချို့သောလူများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်အချို့ကိုအမှန်တကယ်တွေ့မြင်နေရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးကောင်းမွန်သောသော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်စကားစုဖြင့်သင်၏ကျောက်ဆူးတံဆိပ်များခေါင်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ပါ။
အခြား site တစ်ခုဖြစ်သည် Slideshare - သင်၏ Powerpoint တင်ပြချက်များကို upload တင်၍ အချင်းချင်းဝေမျှနိုင်သည့်စိတ်ကူးကောင်းသော site တစ်ခု။ သင်၏ slideshare ဖော်ပြချက်များတွင်ကောင်းမွန်သောသော့ချက်ကျသောသော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ပြပြီးသင်၏တင်ဆက်မှုများကိုဂရုတစိုက်မှတ်သားပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့သင်၏စီးပွားရေး 'link ကိုပြန်ထားရန်သေချာစေပါ။
သင်သည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်ဆတိုးပြီးသင်၏စီးပွားရေးဘလော့ဂ်နှင့်အတူ Facebook တွင်တင်ဆက်မှုကိုဝေမျှလိုပါကသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည် Slideshare Facebook App!
ပြီးတော့ Slideshare အကြောင်းပြောရင်ခင်ဗျားအခုလုပ်နိုင်ပါပြီ သင်၏တင်ဆက်မှုများကိုသင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်းတွင်ထည့်ပါ အဖြစ်ကောင်းစွာ! LinkedIn ဟာတကယ်ကိုသင့်ရဲ့ကွန်ရက်နဲ့မျှဝေတဲ့နေရာမှာသင့်ရဲ့ content တွေကိုသူတို့ရဲ့ application ထဲကိုသယ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။
LinkedIn နှင့် Slideshare ထည့်နည်း
Tags: Facebook ကlinkedinslideshare